Daawo: Magaalada Kismaayo oo la ciirciireysa ciidamo hubeysan oo gudaha magaalada ku soo badanaya – idalenews.com
Tan iyo markii ay magaalada Kismaayo gacan ku haynteedu la wareegeen ciidamada maamulka hadda ka arrimiya ee Jubaland waxaa magaalada ku soo badanaayey tirada] gaadiid iyo maleeshiyaadka hubeysan ee lagu dhex arkaayo gudaha magaalada xeebta ah ee Kismaayo. Waxaad wadooyinka magaalada ku arkeysaa gaadiidka dagaalka oo si xowli ah ku socda iyo rasaas macno daro loo diro mararka qaar, taasoo cabsi iyo welwel aan la soo koobi karin ku abuurtey shacabka magaalada Kismaayo.
Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe ayaan iyagu ku guuleysan in maleeshiyaadka hubeysan ee meel kastaa magaalada la taagan qoryaha hub ka dhigis ku sameeyaan iyo in ay sidoo kale xakameeygaadiidka dagaalka ee xawaaraha ku socda ee shacabka qaati ka jogaan.
Magaalada Kismaayo oo beelaha wada dega ay dhamaantood hubeysan yihiin ayaan la garan karin in maamulka uu ku guuleysan karo inuu hub ka dhigis ku sameeyo ama ugu yaraan awood u yeesho in baro cayiman la geeyo maleeshiyaadka tirada badan ee magaalada dhex ceegaaga.
Daawo: AMISON Engineers oo Wadada isku xirta Mogadishu iyo Afgooye dayactir ka wada